Mpamatsy vokatra sy orinasa mpamokatra kintana - Mpanamboatra vokatra Star China
Masinina manapaka sy kitapo manenona kitapo feno kitapo PP
PP nanamboatra kitapo mpanamboatra milina, manapaka ary manjaitra. Masinina mifangaro mitambatra milina fanapahana sy milina fanjairana. Mitsitsy ny asa ary mahatonga ny kitapo hamokatra mora kokoa.
Kitapo feno kitapo vita amin'ny kitapo PP vita amin'ny otrikaina sy fanjairana ary fanaovana pirinty
Kitapo vita tenona PP manamboatra milina, manapaka, manjaitra ary manonta. Masinina mitambatra mitambatra milina fanapahana, milina fanjairana ary milina fanontana izy io. Mitsitsy ny asa ary mahatonga ny kitapo hamokatra mora kokoa.
Fanetezana mandeha ho azy & fampidirana & zaitra
PP nanamboatra kitapo fanaovana masinina, manapaka, mampiditra ary manjaitra. Masinina mitambatra mitambatra milina fanapahana, milina mampiditra ary milina fanjairana. Mitsitsy ny asa ary mahatonga ny kitapo hamokatra mora kokoa.
Masinina fanaovana sobika PP automatique feno
Masinina fanaovana sobika PP automatique feno. Sehatra fampiharana: kitapo simenitra, kitapo vovoka putty sns.
Masinina fanaovana kitapo vita amin'ny simenitra PP Woven
PP nanamboatra kitapo simenitra fanaovana kitapo. Ny andiam-panovana vaovao farany ambany amin'ny valizy dia manamboatra teknolojia fantsom-panafody mafana hamokarana kitapo vita amin'ny PP vita amin'ny laminasy.
Kitapo rivotra feno fitoeran'entana feno & kitapo fanaovana kitapo rivotra Dunnage
Kitapo rivotra feno fitoeran'entana feno & kitapom-batsy manao kitapom-batsy manao kitapo, manao kitapo rivotra ary kitapo rivotra tsy miova ho an'ny fitaterana
Milina manapaka kitapo lava
Ny milina dia mety amin'ny halavany voafaritra, marika ary miasa mafana amin'ny kitapo lamba misy halavany mitovy.
Fanapahana mafana sy fanapahana mangatsiaka rehetra
Ity masinina ity dia maodely nohatsaraina, mifangaro tsara amin'ny fanapahana mafana sy ny fanapahana mangatsiaka. Ny fanapahana mafana sy ny fanapahana mangatsiaka dia afaka manova mora foana sy milamina ao anatin'ny iray minitra nefa tsy misy famongorana ireo faritra.